Faka imephu kwi-Excel-fumana ulungelelwaniso lwejografi- ulungelelwaniso lwe-UTM- iGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Faka imephu kwi-Excel-fumana ulungelelwaniso lwejografi- ulungelelwaniso lwe-UTM
IiphotographyGoogle umhlaba / imephuUkuprinta kokuqala
Imephu.XL yisicelo esikuvumela ukuba ufake imephu ngaphakathi kwe-Excel uze ufumane izilungiso ngqo kwimaphu. Unokubonisa kwakhona uludwe lwezakhono zokuhamba kunye neendlongo ezinde kwimaphu.
Indlela yokufaka imephu kwi-Excel
Nje ukuba iNkqubo ifakwe, yongezwa njengethebhu eyongezelelweyo ebizwa ngokuthi "Imephu", kunye nokusebenza kweMaphu.XL.
Phambi kokufaka imephu kufuneka uqwalasele imephu yangasemva, oku kwenziwa kwi-icon "yomniki-maphu". Kuyenzeka ukuba uqwalasele imvelaphi usebenzisa zombini iimephu, njengomfanekiso okanye umxube osuka kwiinkonzo:
Vula i-Street Street
Imephu ibonakala ikhonjiswe ngakwesokudla, kodwa inokudityaniswa ukuze ithambile, okanye kwizantsi / phezulu kwetafile ye-Excel.
Le vidiyo ifingqa indlela yonke inkqubo echazwe ngayo kweli nqaku yenziwe, isebenze kwimigca yesalathiso esebenzisa iMaphu yeBing njengemvelaphi.
Indlela yokufumana iinqununu ukusuka kwi-Excel
Oku kwenziwa ngophawu "Fumana ulungelelwano". Inkqubo ngokusisiseko:
Cinezela “Thola iNdibaniselwano,
Cofa kwi-cell ye-Excel
Cola, usebenzisa "Ctrl + V", okanye iqhosha lemouse lasekunene kwaye ukhethe Cola.
Indlela yokwenza uluhlu lweeNkonzo
Ithempleyithi uboniswe kumzekelo video, wakhiwe yi egeomates, kwaye ikuvumela Ndahamba unamathela zilungelelanise ngokwelo njengomqwalaseli, ukuba uya zingqinelane itafile nobude.
IMapXL isimahla, kwaye ungayikhuphela kule khonkco. Itheyibhile ye-Excel esetyenziswe kumzekelo nayo iya kukhutshelwa.
Thumela izilungiso kwimephu.
Oku kwenziwa ngophawu lwe "Ad markers", emva kokukhetha indawo yetafile enomdla. Emva koko kuvela ifom ebonisa ukuba yeyiphi indawo yesibanzi, eyi-Latitude, inkcukacha yolungelelwaniso kunye nesimboli semephu. Ukuzisusa kufuneka wenze nje "Susa amaphawu".
Landa apha kwiMaphu.XL, kuquka i template ye-Excel.
Le vidiyo ibonisa inkqubo echazwe kweli nqaku, usebenzisa umzekelo wokubonakalisa ityelelo kwi-volcano, usebenzisa i-Open Street Maps njengemvelaphi.
Bona i-UTM idibanisa kwimephu esuka kwi-Excel:
Ukusebenza okuboniswe apha ngasentla kubonisa ukuba ulungelelwaniso lwejografi luza kujongwa kwimephu ekwi-Excel. Ukuba ufuna ukubonisa kule mephu ilungelelanisa kwi-Universal Traverso Mercator (UTM), kuya kufuneka usebenzise itemplate enje ngale. Umzekelo oboniswe kumfanekiso nakwividiyo uyakwenza oko:
unokufumana itemplate apha.
I-Bentley Systems ikhulisa idizayini kunye namaxwebhu anikezelo kwizakhiwo zekhonkrithi ngokufumana iS-Cube Futuretech
UJavier Arrocha uthi:
Ngaba ikhona indlela yokuKhangela ngegama okanye idilesi?
Ewe, kufuneka isebenze ngokuqhelekileyo.
Juan José uthi:
Sawubona, usebenza ngokufanelekileyo kwi-Excel Office 365? Andikwazi ukubona iTebhu ithebhu emva kokuyifaka.
Uxolo Asizange siphawule.
UJuan Pablo Meyer Cal yoMeya uthi:
Sawubona, isiqhagamshelo sokukhuphela i-map.xl asisasebenza.
Apha ungayilanda isofthiwe
Sawubona mnumzane kakuhle ekuseni.
Ndalanda i template kodwa akukho nxu lumene nesofthiwe ngokwayo.
Kubonakala kunokuba kwezinye iilwimi ezihlukeneyo kunezikoqobo (iSpanish), ikhonkco kunye nefom yokukhuphela ibonakala.
Yiya kwiinqakrazo zeeflegi zeenyawo uze ukhethe isi-spanish.
Ngoko, uya kubona ifom kunye nezonxibelelwano.
Inqaku elifanayo ngolwimi lwakho
shokit Ali uthi:
Ndingayilanda njani iprogram ye-map.xl nge template evelele
Ubume bomhlaba-i-GIS (341)